प्रचण्ड कमरेड कम्युनिस्ट आन्दोलनको महानायक बन्ने अवसर फेरि पनि छ – Kadar News : Oneline Digital News:
प्रचण्ड कमरेड कम्युनिस्ट आन्दोलनको महानायक बन्ने अवसर फेरि पनि छ
नेकपाका युवा नेता, महेश बस्नेत
प्रकासित : ८ मंसिर २०७७, सोमबार १७:०७
८ मंसिर, काठमाण्डौ । युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेतको संक्षिप्त परिचय हो– पूर्वमन्त्री, नेकपाका युवा नेता अनि प्रतिनिधिसभाका सांसद । यसबाहेक उनको अर्को पहिचान पनि छ – माओवादीको खरो आलोचक ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केपी ओली पक्ष र प्रचण्डपक्षबीच अन्तरविरोध चर्किएका बेला महेश बस्नेतको भूमिका के होला ? पक्कै पनि उनी प्रचण्ड पक्षलाई भित्तामा पु¥याएर एमालेको पुनर्गठन गराउन चाहन्छन् भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । तर, अनलाइनखबरसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा सांसद बस्नेत अलि भिन्नैरुपमा प्रस्तुत भए ।
सांसद बस्नेतले अब प्रचण्ड र माधव नेपालले उच्च स्तरको समझदारी गरेर पार्टीलाई बचाउनुपर्ने बताए । ओली पक्षबाट माधव नेपाललाई अलि बढी नै पेलिएको उनले स्वीकारे । साथै, अब केपी ओलीले प्रचण्डको पत्रको व्यक्तिगत जवाफ दिनतर्फ लाग्नु उपयुक्त नहुने पनि उनले बताए ।
प्रस्तुत छ केपी ओली पक्षका नेता बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हामी यहाँ उर्तान चाहन्छौं ।
यसलाई दुई कोणबाट व्याख्या गर्छु । सैद्धान्तिक पक्षमा हामी दुई पार्टी किन एक भयौं भन्नेमा जानुपर्छ । माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको माध्यमबाट क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई टुंगोमा पु¥याएन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दोस्रो, जातीय आधारमा समाजलाई विभाजित गरेर जातीय मुक्ति नै समग्र एजेण्डा हो भन्ने निष्कर्षमा ऊ सफल भएन । तेस्रो कुरा, रणनीतिक हिसाबले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सहरी विद्रोहबाट ढाल्न माओवादी असफल भयो ।
एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनबाट अगाडि बढ्यो । तर, अनेकखालका जालझेल र तिकडमलाई चिर्न सकेन । जसका कारणले एमाले पहिलो पार्टी हुने कुरा नै उसका लागि दबावको विषय बन्यो । तर, जब, माओवादीले २०६४ सालको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत भोट ल्यायो । ७० सालमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा आयो र ७४ सालको निर्वाचनमा १३ प्रतिशतमा झ¥यो । एमालेका हिजोका भ्रमहरु र तिकडमहरु चिरिँदै गयो । यसको मतलब के हो भने माओवादी घट्दो हुँदै तेस्रो पोजिसनमा गयो ।
त्यसो हुनाले यी दुई दलबीचको एकता अनिवार्य थियो । तर, एकता पछाडि के भयो भने दुईवटा डरले काम ग¥यो । माओवादीलाई भोलि दीर्घकालसम्म एकता भएन भने छुट्टिन पाउने अधिकारसहित एकता हुनुपर्छ भन्यो । त्यसो भएकाले हरेक ठाउँमा उसले ४० प्रतिशत माग ग¥यो । तर, वस्तुगत यथार्थको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनमा पनि समानुपातिक भोटमा एमालेले दुई तिहाइ ल्यायो । अनि, एकता भयो । अहिलेसम्म नभएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाऔं । तर, कमिटी र जनताको बीचको सन्तुलन मिलेन । जनतामा एमालेप्रति बढी आकर्षण छ । त्यसमा पनि केपी ओलीको कारणले यस्तो भयो भन्ने जनताको बुझाइ छ । तर, माथिल्लो कमिटीमा प्रचण्ड कमरेडले एमालेभित्रको गुटबन्दीलाई खेल्न सक्दा उहाँको पक्षमा मूलतः केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा बहुमत भयो । योबीचबाट अन्तरविरोध प्रकट भएको छ, कुनै सैद्धान्तिक कारणले होइन । अब एकताको महाविधेशनसम्म पुग्ने हो । पार्टी प्रक्रियाको मूल भाव पनि यही हो ।
हामी युवा पुस्ताले केपी ओलीलाई किन समर्थन ग¥यौं भने उहाँले आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पनि हुन्न र प्रधानमन्त्री पनि हुन्न भन्नुभएको छ । यो निकै उत्साहको खबर हो । यही कुरा आज किन प्रचण्ड र माधव कमरेडले भन्न सक्नुहुन्न ? भन्ने नयाँ बहस युवा पंक्तिमा देखिन्छ ।
कल्पना गरौं– अमेरिकामा वाइडनले किन आज यस्तो मत प्राप्त गरे ? यदि, फेरि उम्मेद्वार बन्न पाउने वैधानिक हैसियत भएको भए बाराक ओबामाहरुले उमेरले पनि हामी साना छौं र लोकप्रियता पनि हाम्रै छ । त्यही भएर हामीलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होला । तर, हाम्रोमा भने प्रधानमन्त्रीको धेरै समय पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअध्यक्षहरुको व्यवस्थापनमा गइरहेको छ । अब उहाँहरुको व्यवस्थापन भनेको कि प्रधानमन्त्री बनाउनुप¥यो कि अध्यक्ष दिनुपर्छ । यो कुरा आजको वस्तुगत अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसोभएको हुनाले तत्कालीन एमाले र माओवादीको ठूलो पंक्तिचाहिँ अहिलेको जस्तो ल्याङल्याङ गर्नुभन्दा विभाजित होऔं र आ–आफ्नो कर्म गरौं भन्ने छ । राम्रो कुराको आशा गर्ने, तर नराम्रो आयो भने पनि सामना गर्ने भनेर हामी अगाडि लागेका छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणाचाहिँ पार्टी विभाजित होओस् भन्ने छैन ।
एकता हुनुहुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष होइन । मेरो निष्कर्ष माओवादीलाई जनताले गरेको ‘इग्नोरेन्स’ र उसले प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन, जसका कारणले आक्रमणको नीति लियो, त्यसको प्रतिरोध हामीले युवा संघको नेताका रुपमा ग¥यौं । त्यसैकारणले माओवादी र हाम्रो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुन पुग्यो । त्यो स्वभाविक नै थियो । मदन भण्डारीको चेलो भएर भन्दा राजनीतिमा स्थायी शत्रु त हुँदैन । एकता प्रक्रियापछाडि के निष्कर्ष निकाल्यौं भने हामी दुई कम्युनिस्ट सगोत्री थियौं । सगोत्रीबीच हिजो अंशको झगडा थियो, एकतापछि हाम्रो अन्तरविरोध सकियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।
धेरै साथीहरुले यस्तो भन्छन् । कतिसम्म भने अहिले छुट्टा–छुट्टै बैठकहरु तलतल बसिरहेका छन् । अब पार्टी फुट्दैछ, तयारी गर्दै गर भन्ने सर्कूलर भइसकेको सूचना पाएका छौं । एउटा टीमको बैठक अर्को टीमलाई थाहा नहुने ढंगले पनि बसेका छन् । अथवा, कुनै तल्ला कमिटीले डाकेको बैठकमा पनि अनुपस्थित हुने कुरा तलतलसम्म जान थालेको छ । यो एकदम विडम्वनापूर्ण कुरा हो । कतिपय साथीहरुलाई त्यो लाग्न सक्छ, तर, वस्तुगत कारणले विभाजन गर्ने कुरा धेरै गाह्रो छ । त्यसैले विभाजन हुँदैन भन्ने भित्री मनमा
लाग्छ । विभाजन गर्नु पनि हुँदैन ।
सचिवालयमा प्रचण्ड कमरेडसहित चार नेता एकातिर हुनुहुन्छ । माधव कमरेडलाई पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकार निर्माण प्रक्रियामा दुई अध्यक्ष मिलेर मलाई पेले भन्ने अनुभूति छ । त्यो स्वाभाविक अनुभूति पनि हो । त्यस्तो भएको पनि हो । किनभने, विगतमा माधव कमरेडले पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा केपी कमरेडलाई साथ दिएका धेरै मान्छेहरुलाई आइसोलेसनमा पारियो भन्ने हिसाबमा केही कुरामा आग्रहहरु र तुषहरु प्रकट भएका होलान् । त्यही कारणले पनि माधव कमरेडले प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको होला । नारायणकाजी कमरेडले आठरनौ महिनासम्म भेटघाट नपाएको कुरा गर्नुभएको छ । उहाँमा संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत सोच्ने कमजोरी देखियो । यसबाहेक नेतृत्वमा नपुगेका ईश्वर पोखरेल, बादल र विष्णु पौडेलहरु एकठाउँमा उभिएको देखिन्छ ।
प्रचण्ड कमरेड फाइदाको पक्षमा हुनुहुन्छ । माधव, झलनाथ कमरेडहरुलाई लिएर जानुभयो भने त उहाँलाई फाइदा हुने भयो । आउँदो महाधिवेशन फेस गर्ने कुरा के हो ? सदस्यताकै कुरा गर्दा पूर्वमाओवादी साथीहरुसँग न रजिष्टर छ, न लेवी प्रणाली, न कुनै रेकर्ड छ । तर, हाम्रो त सबै व्यवस्थित छ । त्यसैले नेताहरुले चाहे पनि प्रचण्डलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिले अध्यक्ष बनाउने ग्यारेन्टी त
छैन । केपी ओली ब्याक हुनु भयो र माधव नेपाल उठ्ने परिस्थिति बन्यो भने पनि माधव नेपालले जित्ने परिस्थिति बन्छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । त्यसैले, तीन महिना पछाडि महाधिवेशन किन कुर्ने ? अहिले नै किन नहटाउने ? अहिले विश्लेषण र संश्लेषण एउटा छ, जनमत एउटा छ भन्ने लाग्छ । अहिले पनि वामपन्थी जनमत विभाजित भएको देख्दिनँ ।
यसको अर्थ, केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुग्दा यो झगडा मिल्छ भन्ने तपाईंको दाबी
सबैलाई चित्त बुझाउने कुरा नै एकदम जटिल छ के ! त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअध्यक्षलाई चित्त बुझाउने कुरा त झन् जटिल विषय हो नि । मैले अघि पनि भनें प्रधानमन्त्रीसँग हामीले धेरै कुरा गरेका छौं । प्रधानमन्त्री पनि धेरै विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुभएको छ । विगतको तिक्तताहरुलाई आधार मानेर विश्वासको वातावरणचाहिँ बनेको छैन । तपाईंले बोलेको कुरामा के विश्वास भन्ने वातावरण बनेको छ । बीचमा फेरि यति धेरै भ्रम र उचाल्ने काम गरिएको छ, त्यसै कारण नेताहरुबीचमा असमझारी बढेको छ । तर, आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पेलेर जाने, सबैलाई माइनस गरेर जाने भन्नेमा हुँदै हुनुहुन्न । पार्टी एकता प्रक्रियामा प्रचण्ड र केपी ओली धेरै बसे, कुरा गरे भन्ने तहसम्म हामीले कुरा ग¥यौं । योबीचमा माधव कमरेडलाई जति स्पेस दिनुपथ्र्यो, त्यो दिइएन । हामीले स्वीकार्नै पर्छ । अब त्यही कमजोरीलाई टेकेर आज प्रचण्ड कमरेडले माधव कमरेडलाई समेट्न खोज्नुभएको छ ।
यी तीनैखालको शक्तिका बारेमा मसिनो बुझाइ भएकाले पार्टी एकता कायमै रहन्छ भन्नेमा विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेदेखि स्थायी कमिटीले दिएका सवै एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सुझाव दिनुहोस्, भनेर पटक–पटक भनिरहनुभएको छ । अब, नबस्दा बसेन भन्ने आरोप लाग्ने, अनि बस्दा के ग¥यो, आश्वासन दियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको मुड चाहिँ पेलेर जाने भन्ने छैन ।
पहिलो कुरा त एकले अर्कालाई खुल्याउनेतिर नजाऔं भन्ने हो । वामदेव कमरेडले भावुक ढंगले कुरा राख्नुभएको सुनेँ । आज प्रचण्ड कमरेडले केपी कमरेडलाई अनेक आरोप लगाउने र केपी ओलीले जवाफ फर्काउने अनि भोलि दुवैथरी मिलेर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पत्रका नाममा फिराद पत्र जस्तो जुन प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई वकिलको जस्तो वकालत गर्ने मोडेलमा होइन कि मिलाउनेतिर जानुपर्छ । त्यो दुईवटा पत्र मिलाउनेतिरै‘